Turtlenecks कसरी रक गर्नेमा प्रियंका चोपड़ा-जोनासबाट संकेत लिनुहोस् - सेलेब स्टाइल
Turtlenecks कसरी रक गर्नेमा प्रियंका चोपड़ा-जोनासबाट संकेत लिनुहोस्
Take Cues From Priyanka Chopra Jonas How Rock Turtlenecks
कसरी ड्यान्ड्रफको कारण कपाल झर्ने नियन्त्रण गर्न
चाहे उनी सडकमा हिंडिरहेकी छ वा रातो कार्पेटमा, प्रियंका चोप्रा - जोनास हामीलाई नोटहरू लिनको लागि हामीलाई सेवा प्रदान गर्ने तरिका जान्दछन्। उनी लामो समयदेखि हाम्रो फेसन रडारमा छिन्। उनको क्यारियर को माध्यमबाट, हामीले अभिनेतालाई उनको केटी-अर्को ढोकाबाट सौंदर्यमा काउचर गाउनमा सर्दै गरेको देख्यौं। प्रियंका धेरै बर्ष उनको sartorial छनौट को साथ अधिक प्रयोगात्मक भएको छ, तर त्यहाँ उनको एक नरम स्थान छ एक प्रवृत्ति छ।
ग्लोबल आइकन टर्टलनेक्सले ग्रस्त छ। जाडो या नहोस्, तपाईं प्राय: अभिनेता एक कछुवा पोशाक खेल देख्नुहुनेछ।
एक कछुवा एक हो जुन तपाइँको घाँटी को सबै भन्दा कभर गर्दछ। टर्टलनेक्सहरू जहिले फेसनमा हुन्छन् र कहिले पनि प्रवृत्तिबाट बाहिर जान सक्दैन। तपाईं पार्टीमा हिट गर्न सक्नुहुनेछ, बैठकमा जानुहोस्, वा सडकमा हिंड्न सजिलो हिसाबले कछुवा पहिरिएको। यो प्रवृत्तिसँग तपाईसँग सँधै प्रयोग गर्न पर्याप्त कोठा हुन्छ। ट्रेंडिंग गर्नका लागि लेयरिंग कुञ्जी हो। एक कछुवा एक सजीलो गर्न सजिलो दृश्य छ, जब सम्म तपाईं यो शैली शैली। तपाईं पनि आधारभूत स्लिम टर्टलनेकमा पेंडन्ट थपेर तपाईंको पोशाक बढाउन सक्नुहुन्छ।
प्रियांका चोपडा-जोनास टर्टलनेक बिभिन्न सामान र दृश्यका साथ टोली बनाउने तरीकाबाट भाग्न तयार देखिदैनन्। यो रेड कार्पेट, औपचारिक घटना वा आकस्मिक दिन होस्, टर्टलनेक्स जहिले पनि उनको पहिलो विकल्प हुन्छ। अभिनेता रचनात्मक टर्टलनेक आउटफिट विचारहरूले भरिएको छ।
प्रेरणाका लागि उनको केही त्रुटिहीन पोशाकहरूमा एक नजर पाउन तल स्क्रोल गर्नुहोस्।
प्रियंका चोपड़ा-जोनास सिल्हूट्ससँग कसरी खेल्ने भनेर जान्दछन्। क्रिश्चियन सिरियानोद्वारा लिइएको यो टर्टलनेक सबै व्यवसाय हो तर पहेलोको बोल्ड पपले यसलाई एक अद्वितीय स्पिन दिन्छ।
प्रियंका पक्का जान्दछन् कि कुनै पनि पोशाकमा व्यक्तित्व कसरी जोड्ने। उनी हामीलाई मितिमा ब्रन्च-डेट ईन्स्पोको मेनू सेवा दिँदैछिन्।
क्यामफ्लाज सही शैली कसरी शैलीको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ? प्रियंका चोपडा-जोनास तपाईंलाई सिकाउन दिनुहोस्। अभिनेता छलावरण प्यान्टमा क्रीम टर्टलनेकमा मिल्दो ब्लेजरमा अत्यन्त सहज देखिन्छ।
सँधै पोलिश गरिएका इन्सिएम्बलहरूको लागि चिनिन्छ, अभिनेताले हरियो टर्टलनेक ब्लाउज र ट्राउजरको लागि अल्ट्रा ग्लैम मोनोक्रोमेटिक लुक प्राप्त गर्न रोज्दछन्।
टर्टलनेक्स चम्किलो र offहरू निकाल्न उत्तम तरिका हुन सक्छ। अझै पनि, प्रियंका चोपड़ा-जोनास एक यस्तो हुन सक्छ जसले एक चहकिलो निलो आउटफिट यति स्टाइलिश देखाउनको लागि प्रबन्ध गर्न सक्दछ।
कसरी शैली मा कभर गर्न स्टार बाट जान्नुहोस्। टर्टलनेक्स चिसो मौसमको लागि उत्तम पिक हो। पोशाकलाई माथि उठाउन, प्रियंकाले यसलाई पूर्वाग्रह कटेको साटन स्कर्ट र साबर घुडा उच्च बुटको साथ टोली बनाउँदछ।
Quirky अझै ठाठ! प्रियंका चोपड़ा-जोनासको अफ-ड्युटी शैली नोटहरू लिन लायक छ। स्टारले मुद्रित टर्टलनेक पोशाकमा यसलाई सरल राख्छ।
शैली सल्लाह: न्यूनतम बेल्ट राख्नुहोस् र सननी तपाईंको लुक बढाउनको लागि।
प्रियांका चोपडा-जोनास राति टर्टलनेक गाउनमा हामी सबैलाई चकित पारिरहेकी थिइन् उनले युनिसेफको कार्यक्रममा लगाउने छनौट गरेकी थिइन। उनले हामीलाई देखाए कि कछुवा कुनै पनि घटनाको लागि उपयुक्त छ।
शैली सल्लाह: सफा, तानिएको पनीटेलले तपाईंको लुकमा भव्यता थप्न सक्छ।
मेट २०१ Priyanka को लागि प्रियंका लगाएको पोशाक हामी कसरी बिर्सन सक्छौं? तेजस्वी कपाल र चाँदी-फ्रोस्टेड ब्राउज र कोर्रा संग, उनी Dior द्वारा एक चाँदी गाउन मा भव्य थियो।
ताराबाट एउटा संकेत लिनुहोस् कसरी सडकबाट हिंड्ने बेलामा टाउको घुमाउँदछन्। यहाँ, अभिनेता कालो छालाको स्कर्ट र ब्लेज़र कोटको साथ एक स्ट्रिप भएको टर्टलनेक जोडी बाहिर निस्कन्छ।
शैली सल्लाह: अधिक परिष्कृत दृश्यको लागि स्टिलेटो हिल लगाउनुहोस्।
यो पनि पढ्नुहोस्: बी-टाउनले कसरी टिकाऊ फेसन प्रवृत्तिहरू नेल गर्ने मार्ग देखाउँदछ
कसरी अनुहारको कपाल घरेलु उपचार हटाउने
अनुहारबाट कपाल हटाउने घरेलु उपचार
पेट र कम्मर घटाउन को लागी व्यायाम
कपाल को विकास को लागी प्राकृतिक उत्पादनहरु
घरमा कपाल समस्या समाधान
पेट कम गर्न पेट व्यायाम